I-Huawei FreeBuds 3, sihlalutya uhlelo olutsha kubomvu | Iindaba zeGajethi
I-Huawei FreeBuds 3, sihlalutya ingxelo entsha ebomvu
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi, Izaziso, Reviews
Inkampani yaseAsia yasungula ixesha eladlulayo uhlelo lwamva nje lwezi ntloko zeNtambo ezingenantambo ezineempawu ezintle. Ngeli xesha siza kuhlalutya uhlelo lwayo olukhethekileyo ngombala obomvu. SineHuawei FreeBuds 3 ebomvu, hlala ubone uhlalutyo lwethu kunye nazo zonke izinto zalo kolu hlaziyo luneenkcukacha. Siqinisekile ukuba awufuni kuyiphosa, kwaye njengoko sihlala sisenza, siluhambisile olu hlalutyo kunye nevidiyo apho unokubona amava ethu, ukungabikho kwebhokisi kunye nendlela abasebenza ngayo imihla ngemihla. Siya apho kunye nohlalutyo olupheleleyo lweHuawei FreeBuds 3 ebomvu.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Zesiqhelo kwaye zisebenza
2 Ukuzimela: Uluhlu olulungileyo lokuzimela
3 Iimpawu zobugcisa
4 Umgangatho wesandi kunye nokucinywa kwengxolo
Uyilo kunye nezixhobo: Zesiqhelo kwaye zisebenza
Into yokuqala ocinga ukuba uyibona xa ubona ibhokisi yeFreeBuds 3 kukuba bayakukhumbuza ngebhokisi yeeshizi ezithile ezenziwe nge-wax ezihamba nathi kubuntwana bethu, ngakumbi ngoku ngolu hlelo lubomvu luye lwasungulwa ngokuhambelana nosuku lweValentine. Nangona kunjalo kwaye ngaphandle kokufuna ukwazi ukuba ujikeleze ngokupheleleyo, ityala lokutshaja lixinene, ukubhitya kancinci kuneeApple AirPods kwaye ngokuthe kratya ngokuthe kratya kunikezwe ubume bayo obujikelezileyo, kodwa nangona kunjalo, sijamelene nelinye lawona matyala okutshaja ukuhambisa abo bavavanyiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ubungakanani be ityala: X x 4,15 2,04 1,78 mm
Ubungakanani be isiphatho: 6,09 x 2,18
Ubunzima be ityala: I-48 gram
Ubunzima be isiphatho: I-4,5 gram
Inyani yile yokuba sinoyilo olusemgangathweni kwimarike, sikhululekile kwaye ndiyayixabisa. Ihlala ilula ukubonisa ukufana kwii-Apple AirPods ukubhekisa kukungabikho kwengcinga, kodwa inyani kukuba luyilo olusebenzayo kwaye luyilo lwe-ergonomic, Phambi kwento encinci enokuphikiswa, uthembekile. Zakhiwe ngeplastiki ebengezelayo, "sinesalathiso sokutshaja i-LED ecaleni kwezibuko USB-C kunye nenqanaba le-LED ngaphakathi, phakathi kweefowuni zombini.
Ukuzimela: Uluhlu olulungileyo lokuzimela
Siqala ngeenkcukacha zobugcisa. Sinebhetri yethiyori ethembisa iiyure ezine zokuzimela kwintloko nganye, iiyure ezingama-20 xa sisibandakanya ityala elinikezela ngeentlawulo ezine ezongezelelweyo. Ukuzilayisha sinezibuko I-USB-C ukuya kuthi ga kwi-6W Kwaye kunjalo ukutshaja ngaphandle kwamacingo nge Umgangatho we-Qi ngeli xesha le-2W. Siqinisekisile ukuba iiparameter ziyahlangatyezwa kwaye sinethuba elimalunga neyure enye ukutshaja ngokupheleleyo ibhokisi kunye nenye iyure yokutshaja ngokupheleleyo ii-headphone, eziya kuhlala zincinci kuba ngokomgaqo akufuneki sisebenzise ibhetri.
Ibhetri ibhokisi: 410 mah
Ibhetri ii-headphone: 30 mah
Ngokwenza oko, izithembiso zebrendi ziphantse zazaliseka ngokupheleleyo. Kwimeko yam, ndifumene iiyure ezi-3 zokuzimela kumthamo osisigxina we-70% kunye nokucinywa kwengxolo kusebenze. yeefowuni ezixubekileyo kunye nokusetyenziswa komculo ngeSpotify. Ukutshaja kuthathe ixesha elincinci kunexesha eliqikelelweyo kuba kwimeko yam ndisebenzise itshaja ye-Qi engenazingcingo eyenza ukuba ikhululeke kakhulu. Ngokuqinisekileyo banikezela ngamava amahle malunga noku.
Ngesixhobo seHuawei yonke into ilula. Ngokuvula ibhokisi kufutshane neHuawei P30 Pro yethu kwaye ucofe iqhosha lasecaleni siqala inkqubo yokumisela ngokukhawuleza nangokulula ekhokelwa yimifanekiso eshukumayo eqhelekileyo. Ukwenza oku kube lula ukuba basebenzise i I-Kirin A1, iBluetooth 5.1 SoC Imowudi yeemowudi ezimbini (eyokuqala), kunye neprosesa yeaudio 356 MHz kwaye ayibonisanga naluphi na uhlobo lokuphazamiseka, ukusika okanye ukulibaziseka kuvavanyo lwethu. IHuawei ithembisa ukubambezeleka ngezantsi kwe-190ms kwaye uqhagamshelo ngesixhobo esingaphantsi kwemizuzwana emi-3 kulandelwe ngqo.
Enkosi kule processor, esele ikho kwezinye izixhobo ezinxitywayo zenkampani, kunye nokudityaniswa ne-EMUI 10 siya kuba nakho ukufumana yonke incindi kwii-headphone, Nangona kunjalo, sinesicelo esifumanekayo kwiVenkile ye App, kwimeko yesixhobo se-Android, esinokusinika ithuba lokuhlengahlengisa isenzo sempompo kabini (akuyomfuneko ukuba sisebenzisa i-EMUI 10). Siza kukhetha ukuba siwumise umculo, siye kwingoma elandelayo, sibize umncedisi okanye senze ukucinywa kwengxolo, sinokuyilungiselela ngokuzimeleyo kwifowuni nganye.
Le app yeAi yoBomi (ifumaneka kuphela kwi-Android) iyakusivumela ukuba sazi ngokweenkcukacha lonke ulwazi kwaye senze nokukhangela uhlaziyo lwe-firmware kwii-headphone, nangona kunjalo, njengoko besesitshilo ngaphambili, ukuba sisebenzisa i-EMUI 10 akuyomfuneko, kuba kuseto yeBluetooth kwaye ngokuzenzekelayo iya kuyenza le misebenzi. Kumava ethu umgangatho weemakrofoni zokwenza iifowuni zikumgangatho ophezulu, uyasahlukanisa kakuhle nengxolo kwaye usivumela ukuba sive ngokucacileyo (kwaye usimamele), yenye yezona zibalaseleyo kwintengiso malunga noku. Inemakrofoni enokhuselo kwangaphambi ezantsi, kunye nesenzi sethambo sokunciphisa ingxolo xa ufaka ilizwi lakho ngokungcangcazela.
Ukuba ufuna ukudlala imidlalo, akufuneki ukhathazeke kakhulu kwimiba ethile, ngaphandle kokunganiki mvakalelo yokulungiswa okugabadeleyo, aziweli lula, kunye nokuqinisekiswa kwazo ukubila kunye nokumelana ne-IPX4 iya kusivumela ukuba sizisebenzise ngokuzolileyo.
Umgangatho wesandi kunye nokucinywa kwengxolo
Siqala ngomgangatho weaudio, sijongane neefowuni ezijikeleze ii- € 200 kwaye ezingabonakali kuphela kulwakhiwo lwazo. Asinazo ii-bass ezigxininisiweyo, kodwa oko kuhlala kubonisa umgangatho weendaba, ngenxa yoko sinemithombo yeendaba ekumgangatho ophezulu ngokuqwalasele uhlobo lwentloko. Umthamo omkhulu uyabonakala kwaye ngokomgangatho ukhwele amahashe kunye nokhuphiswano oluphambili kwaye ngakumbi kwiimveliso zoluhlu lwamaxabiso afanayo. Ngokucacileyo, njengoko kuhlala kusenzeka kolu hlobo lwee-headphone, azenzelwanga esona sandi sikhulu.
Ngokuphathelene nokucinywa kwengxolo, kulungile ... Sithathela ingqalelo uyilo lwayo oluvulekileyo kunye nokukhetha kwayo ngenkalipho ukusebenzisa le teknoloji. Ngaphandle kobuncinci bodwa bodwa (azikho ezindlebeni) abanakukhetha ngaphandle kokusebenza nzima kuwo. Kananjalo, ukucinywa kwengxolo ayingommangaliso, kugxila ngakumbi ekupheliseni imisindo yangaphandle nengaphindaphindwanga, kodwa ulibale malunga nokuzahlula ngokupheleleyo kwizithuthi zikawonke-wonke okanye ezinje.
Ungazithenga ezi I-Huawei FreeBuds 3 ebomvu kwi-179 euro Zombini kwiAmazon nakwiwebhusayithi esemthethweni ye- Huawei, Indawo yeHuawei eMadrid kunye neendawo eziphambili zokuthengisa.
Umgangatho wezinto zokwakha kunye nolwakhiwo lwazo
Ukuzimela kunye nezixhobo zokutshaja
Umdibaniso olungileyo kunye nezixhobo zeHuawei
Amandla okwenza ngokwezifiso useto kunye nokucinywa kwengxolo
Banokuxabisa amaxabiso aphakathi
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa ukuba unesixhobo esine-EMUI 10
Abavumeli ukunyenyisa ivolumu kwimowudi yokuthinta
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Huawei FreeBuds 3, sihlalutya ingxelo entsha ebomvu
IPanasonic yazisa i-GZ2000, eyona TV kamabonwakude kakhulu kwihlabathi
Isikhululo senqwelomoya saseBarajas eMadrid silungiselela ukufika ngokungxamisekileyo